ConnectLeader TopRung: B2B Kutengesa Kubatanidzwa uye Performance Management Turu | Martech Zone
B2B kutengesa kuwedzera matekinoroji mutsva ConnectLeader yakazivisa kuwanikwa kwayo TopRung kutengesa gamification uye mashandiro ekushandisa ekushandisa. TopRung inoshandisa simba remakwikwi echikwata kuenzanisa, kutora uye nekukurumidza zviitiko zvekutengesa, pamwe nekutyaira kutengesa maitiro kutora uye kugadzira zvimwe zvinotungamira zvechizvarwa hurukuro dzinova mikana yemapaipi. TopRung inoshandisa simba remakwikwi echikwata, mutambo wemitambo uye kunakidza ku:
Gadzirisa, gamuchira uye mhanyisa yekutengesa zviitiko
Dhiraivha kutengesa maitiro ekugamuchirwa
Gadzira zvimwe zvinotungamira zvechizvarwa hurukuro dzinova mikana yepombi.
TopRung yakatumidzwa zita a fainari muBIG Mitezo yeBhizinesi muNew Product yeGore.
Isu tinoshandisa TopRung kugadzirisa chikamu chakakoshesesa chedu hwekutengesa maitiro- kuchengetedza reps inobatanidzwa uye inokurudzirwa pane inoenderana hwaro uye nemakwikwi mashoma ane hushamwari akavakirwa mukati. Katie Lawrence, CareerMinds VP yekutengesa
Kubatanidza kweLeadLeader's kunoisa hunhu hwevanhu mumitambo uye kunakidzwa mukuita kweanotengesa masisitimu anhasi.
Mitambo yakagara ichichengeta vatambi vachiita sezvo ivo vachikwikwidza kuzadzisa zvibodzwa kuburikidza nekurudziro, kufunga kwekugadzira uye kubatana kwechikwata. ConnectLeader's TopRung gamification inotora yese kunakidzwa kwemutambo-based dambudziko uye kuisanganisa muzvirongwa zvemazuva ano zvekutengesa kusimudzira ruzivo rwekutengesa uye kuvhara chibvumirano. Senraj Soundar, ConnectLeader's CEO
TopRung zvakare inosimudza zvese zvakajairwa zvinhu muSalesforce uye ConnectLeader dhata, kune tsika-kukodzera chishandiso chero bhizimusi chinodiwa. Zvimwe zvinhu zvinosanganisira:
Makwikwi - Kufananidza nevezera ravo kuti vaone vanokunda uku vachiseta zvinetswa pakati pezvikwata zvekutengesa kuona kuti ndiani anoguma ari pamusoro.
Honors - Mubairo wekutengesa kugadzirira uye chiitiko nekusimbisa mashandiro kune vatambi vechikwata, vatinoshanda navo uye manejimendi.
Notifications - Broadcast leaderboard inofambira mberi paTV Chiteshi kana sikirini yakaiswa pamusoro pekutengesa pasi- nenziyo dzinochinja-chinja uye kuputsa nyevero dzenhau dzinopemberera zviitiko zvikuru.
Yakapfuma Dhata Kuongorora - Inotendera mamaneja ekutengesa kuti ave neyese yekutengesa yekuita data munzvimbo imwechete. Zvekutengesa zviitiko, mhedzisiro uye kufambira mberi zvinotorwa kuti zvipe mamaneja kufambira mberi kuongorora uye kugona kugadzirisa kana kusimudzira maitiro.
ConnectLeader inopa kutengesa kumhanyisa tekinoroji yemhando dzese dzekutengesa mabasa ekuwedzera iwo emhando yepamusoro mari kuburikidza nekukurumidza kutaurirana, kuderedzwa kwemitengo uye zvakagadziridzwa zvekushambadzira zviwanikwa kuti zvibudirire. Iyo ConnectLeader Intelligent Sales Yekumhanyisa chikuva inopa yekutengesa uye yekushambadzira zvikwata zvishandiso zvine simba kuona uye kuita yepamusoro-soro yekutengesa tarisiro uye inosanganisira kutengesa kubatanidza kugadzirisa mhinduro dzemarudzi ese ekutengesa uye mabhizinesi ekuvandudza zvikwata. Iyi hunyanzvi hwegore-hwakavakirwa tekinoroji yakavakirwa paConlineLeader Adaptilytics ™ data njere injini iyo inoratidza uye nekuisa pamberi pekunze kufona mazita ekuvimbisa ako akanakisa anotungamira anofonerwa kutanga.
Tags: mutsikamakwikwiconnectleadergamificationkatie lawrencemutungamiri wechizvarwaMapaipibasa rekutengesamakwikwi ekutengesaKugonesa Kugonesakutengesa gamificationkutengesa zvinangwapombi yekutengesamakwikwi echikwata chekutengesavatengesi zvikwatasalesforcesenraj soundartoprung